UYOHANE 4 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UYOHANE 4UYOHANE 4
UYesu ufundisa uNikodimo
31Kwakukho inkokheli yamaJuda, egama linguNikodimo. Yona yayiyeyehlelo *labaFarasi. 2Ngabusuku buthile lo Nikodimo weza kuYesu, wathi: “Mfundisi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho bani unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanaye.”
3UYesu waphendula wathi kuye: “Ndithi kuwe, inene, akukho namnye unokuxhamla ukulawulwa nguThixo,Okanye “unokububona ubukumkani bukaThixo” engathanga azalwe ngokutsha.”
4UNikodimo wathi kuye: “Angáthini na ukuzalwa umntu oselemdala? Kaloku akangekhe aphindele esizalweni sikanina, aze azalwe kwakhona.”
5Waphendula uYesu, wathi: “Ndithi kuwe, inene, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nanguMoya kaThixo, akanakulawulwa nguThixo.Okanye: “akanakungena ebukumkanini bukaThixo” 6Okuzalwa yinyama negazi kuyinyama negazi; okuzalwa nguMoya kunguMoya. 7Sukumangaliswa kukuba ndithe kuwe: ‘Nimelwe kukuzalwa ngokutsha.’ 8Umoya uphephezela apho uthanda khona, ùsive isandi sawo, kodwa ùbe ungawazi apho úvela khona nalapho úya khona. Bakwanjalo ke bonke abazelwe nguMoya kaThixo.”
9Waphendula uNikodimo esithi: “Ingenzeka njani le nto?”
10Waphendula uYesu wathi: “Ungumfundisi omkhulu nje wakwaSirayeli, ungathini ukungazazi ezi zinto? 11Ndithi kuwe, inene, sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo, kanti noko nisuka ningabamkeli ubungqina bethu. 12Ukuba ndinixelele izinto zasehlabathini naza anakholwa, nothini ke ukukholwa ndakunixelela izinto zasezulwini? 13Akukho namnye wakha wenyuka waya ezulwini, ngaphandle kwalowo wehlayo evela ezulwini, *uNyana woLuntu.
14“Njengokuba uMosis wayiphakamisayo inyoka entlango,Ntlango 21:9 umelwe kukuphakanyiswa kwangokunjalo naye uNyana woLuntu, 15ukuze bonke abakholwayo kuye babe nobomi obungonaphakade. 16Kaloku uThixo ihlabathi ulithande kangangokuba ude wancama uNyana okuphela kwakhe, ukuze wonke umntu ozinikele kuye ngokupheleleyoOkanye “okholwayo” angatshabalali, koko abe nobona bomi bungenasiphelo. 17Kuba kaloku uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe, koko wamthuma ukuze abe nguMsindisi walo.
18“Lowo uzinikelayo kuNyana kaThixo akagwetywa; kodwa lowo ungazinikeliyo selegwetyiwe, kuba engakholwa kuNyana kaThixo okuphela kwakhe. 19Imbangi yesi sigwebo nantsi: Ukukhanya kufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokukhanya, kuba izenzo zabo zikhohlakele. 20Kakade wonke umenzi wenkohlakalo ukuthiyile ukukhanya. Akasondeli nokusondela ekukhanyeni, hleze izenzo zakhe zivele. 21Ke lowo ungowenyaniso uyeza ekukhanyeni, ukuze abonakale ngezenzo zakhe ukuba umthobele uThixo.”
UYohane udedela uYesu
22Emva koko uYesu nabafundi bakhe baya kummandla wakwaJuda; waza uYesu waba nexesha ekunye nabo apho, ebhaptiza. 23UYohane naye wayebhaptiza e-Enon, kufuphi neSalem, kuba amanzi ebemaninzi apho. Abantu babesiya kuye, ababhaptize. 24Ngelo xesha wayengekafakwa entolongweni.
25Abafundi bakaYohane bâphikisana nomJuda othile malunga nokuhlanjululwa. 26Baya kuYohane ke, bathi kuye: “Mfundisi, laa mntu wayekunye nawe phesheya kweJordan, lowa umngqineleyo, úyabhaptiza, kwaye baya kuye bonke abantu.”
27Waphendula uYohane wathi: “Lonke ilungelo analo umntu ulinikwa nguThixo. 28Nani ngokwenu ningandingqinela okokuba ndathi: ‘Andinguye mna *uKrestu, koko ndingothunywe ngaphambi kwakhe.’ 29Kaloku umtshakazi ngowomyeni. Ke yena umkhaphi womyeni ulindela ukufika komyeni, aze avuye kunene akuliva izwi lakhe. Ngokukwanjalo luphelele ngoku uvuyo lwam. 30Makabaluleke yena, ndinciphe mna.”
Lowo uvela ezulwini
31“Lowo uvela phezulu unewonga kunabantu bonke. Lowo uvela ehlabathini ungowasehlabathini, kwaye uthetha okwehlabathi. Lowo uvela ezulwini unewonga kunabantu bonke. 32Yena ungqina ngako oko akubonileyo nakuvileyo, kanti noko akukho bani ubamkelayo ubungqina bakhe. 33Othe wabamkela ubungqina bakhe uqinisekisa okokuba uThixo uyinyaniso. 34Kaloku ethunyiwe nje nguThixo, uthetha amazwi kaThixo, kuba uThixo umnika uMoya wakhe ngokungenamlinganiselo. 35UYise uyamthanda uNyana; zonke izinto uzinikele esandleni sakhe. 36Othe wakholwa kuNyana, unobomi obungonaphakade. Othe akamthobela uNyana, akayi kubona bomi; ingqumbo kaThixo ihlala ihleli phezu kwakhe.”
41-2Naxa uYesu ngokwakhe engazange abhaptize namnye, ingabafundi bakhe ababebhaptiza, *abaFarasi beva ukuba uYesu ugqithisile kuYohane ukufumana abafundi ababhaptize. 3Ngenxa yoko uYesu wemka kwelakwaJuda, wabuyela kwelaseGalili. 4Kwakufuneka acande kwelamaSamariya.
5Wafika kwidolophu yaseSamariya ekuthiwa yiSikare, kufuphi nendawo awathi uYakobi wayinika uJosefu unyana wakhe.ZiQalo 33:19; Yosh 24:32 6Lalilapho iqula likaYakobi, waza wathi uYesu, ediniwe luhambo, wahlala phantsi ngasequleni apho. Kwakusemini emaqanda.Okanye, ukuba uYohane ixesha wayelibala isiRoma: “Kwakungokuhlwa malunga nentsimbi yesithandathu.”
7Kwafika umSamariyakazi, eze kukha amanzi, uYesu wathi kuye: “Khawundiphe amanzi, ndisele.” 8Abafundi bakhe babengekho, beye kuthenga ukutya edolophini.
9Waphendula ke umSamariyakazi wathi kuye: “Ungathini na wena ungumJuda nje, ukuwacela kum amanzi, ndingumSamariya nje mna?” Kaloku amaJuda akanabudlelane namaSamariya.
10Waphendula uYesu wathi kuye: “Ukuba ubusazi isipho uThixo afuna ukukupha sona, ùmazi ukuba ngubani na lo ucela amanzi kuwe, ngewucele kuye wena, aze yena akuphe amanzi aphilileyo.”
11Umfazi lowo wathi kuye: “Nkosi, akunanto yakukha, nequla linzulu; ungawafumana phi ke amanzi aphilileyo? 12Ngaba wena umkhulu na kunokhokho wethu uYakobi, owasinika eli qula, awayesela kulo ngokwakhe kwakunye noonyana bakhe nempahla yakhe?”
13Waphendula uYesu wathi kuye: “Bonke abasela kula manzi baya kubuya banxanwe. 14Ke yena othe wawasela amanzi endiya kumpha wona mna, soze anxanwe naphakade. Amanzi endiya kumnika wona, aya kuba ngumthombo ompompoza kuye, emnika obona bomi bungenasiphelo.”
15Umfazi wathi kuye: “Nkosi, nam ndiphe loo manzi ukuze ndingabi saphinda ndinxanwe, ndingezi nokuza kukha manzi apha.”
16Wathi kuye: “Hamba uye kubiza indoda yakho, nize apha.”
17Waphendula umfazi wathi: “Andinandoda.”
UYesu wathi kuye: “Ùnyanisile ukuthi akunandoda, 18kuba ubunamadoda amahlanu, nale unayo ngoku asiyoyakho.”
19Umfazi lowo ke wathi kuye: “Nkosi, ndiyabona okokuba wena *ungumshumayeli. 20Ookhokho bethu, thina maSamariya, babenqula uThixo kule ntaba. Ke nina maJuda nithi iseJerusalem indawo apho abantu bamelwe kukumnqula khona uThixo.”
21UYesu wathi kuye: “Ndiyakuxelela, liyeza ixesha ekothi ngalo ningabi samnqula uBawo kule ntaba okanye eJerusalem. 22Nina maSamariya ninqula eningakwaziyo. Thina maJuda sinqula esikwaziyo, kuba kakade kukwaJuda apho usindiso luphuma khona. 23Kodwa kuza ixesha, kwaye selikho, abaya kuthi ngalo abanquli benene bamnqule ngoMoya benyanisile uBawo, kuba uBawo ufuna abantu abamkhonza ngolo hlobo. 24UThixo unguMoya; abo ke bamnqulayo kufuneka bamnqule ngoMoya benyanisekile.”
25Loo mfazi wathi kuye: “Ndiyazi ukuba *uMesiya, ekuthiwa *nguKrestu, uyeza. Wothi ke akufika asixelele konke.”
26UYesu wathi kuye: “Nguye kanye lo uthetha nawe.”
27Kwathi ngelo xesha bafika abafundi bakaYesu, bamangaliswa kukuba ethetha nomntu obhinqileyo. Noko akubangakho namnye owathi: “Ufuna ntoni na kuye?” okanye owathi: “Kutheni na ukuba uthethe naye?”
28Umfazi lowo ke wayishiya ingqayi yakhe, waya edolophini, wathi ebantwini: 29“Yizani nibone; nanku umntu ondixelele zonke izinto endakha ndazenza. Akangebi *nguKrestu na?” 30Baphuma ke edolophini, baya kuYesu.
31Ngeli thuba abafundi bakaYesu babembongoza besithi: “Mfundisi, nantsi into etyiwayo!”
32Kodwa yena wathi kubo: “Mna ndinokutya eningakwaziyo nina.”
33Baza abafundi babuzana besithi: “Ngaba kukho mntu umzisele ukutya na?”
34UYesu wathi kubo: “Ukwenza ukuthanda kwalowo undithumileyo kukutya kwam, ndide ndiwufeze umsebenzi wakhe.
35“Anitsho na ukuthi: ‘Kusele iinyanga ezine, kuvunwe’? Niyabona, ndithi kuni, inene, wakhangeleni kakuhle amasimi; nophawula ukuba akulungele ukuvunwa. 36Umvuni seleza kwamkela umvuzo wakhe, evuna isivuno esingabantu abamkela ubomi obungonaphakade. Ngako oko ohlwayelayo uvuya kunye nalowo uvunayo. 37Kungoko liyinyaniso iqhalo elithi: ‘Kuhlwayela lo, kuvune lowa.’ 38Ndinithume ukuvuna oko ningabulalekanga kuko. Kwabulaleka abanye, naza nina natya kwimveliso yabo.”
39Into eninzi yamaSamariya aloo dolophu yakholwa kuYesu, yakuva intetho yaloo mfazi ethi: “Undixelele zonke izinto endakha ndazenza.” 40Athe ke amaSamariya akufika kuYesu, ambongoza ukuba ahlale nawo; waza wahlala khona apho iintsuku zambini.
41Baba baninzi ngakumbi abo bâkholwáyo ngenxa yamazwi kaYesu, 42baza bathi kumfazi lowo: “Asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakho. Thina sikholwa kuba sizivele ngokwethu, saqonda ukuba ngenene lo nguye uMsindisi wehlabathi.”
43Emva kweentsuku ezimbini uYesu wemka apho, waya eGalili.
UYesu uphilisa unyana wegosa lakomkhulu
44UYesu ngokwakhe wayetshilo ukuthi *umshumayeli akenzelwa mbeko kowabo, 45kodwa akufika eGalili abantu balapho bamamkela. Babezibonile zonke izinto awazenzáyo kwitheko *lePasika eJerusalem, kuba nabo babeyile kweso sidlo.
46Waphinda uYesu wahambela eKana kwelaseGalili, apho wawaguqulayo amanzi aba yiwayini. Kwakukho igosa elithile lakomkhulu apho elaligulelwa ngunyana walo eKapernahum. 47Lakuva ukuba uYesu ufikile eGalili, evela kwelakwaJuda, laya kuye, lambongoza okokuba ehle aye eKapernahum, aphilise unyana walo owayegulela ukufa. 48UYesu wathi kulo: “Nina aningekhe nikholwe ukuba anithanga nabona imiqondiso nemimangaliso!”
49Igosa lakomkhulu ke lathi kuye: “Nkosi, nceda uze engekabhubhi umntwana wam.”
50UYesu wathi kulo: “Goduka; unyana wakho uphilile.”
Indoda leyo yakholwa ngamazwi kaYesu, yahamba. 51Kwathi isesendleleni yahlangatyezwa zizicaka zayo, zathi: “Unyana wakho uphilile!”
52Yabuza ke ukuba uqale nini na ukuchacha, zaza zathi: “Uchache izolo ngentsimbi yokuqalaOkanye, ukuba uYohane ixesha wayelibala isiRoma “ngentsimbi yesixhenxe” emva kwemini kuloo mkhuhlane.” 53Wakhumbula ke uyise ukuba kwakungêlo xesha kanye uYesu awatsho ngalo kuye ukuthi: “Unyana wakho uphilile.” Lakholwa ke igosa lakomkhulu, yakholwa nendlu yalo yonke.
54Lo mqondiso wawenzayo uYesu wawungowesibini emva kokufika kwakhe eGalili evela kwelakwaJuda.
Ukuphiliswa kwesigulana eBhetesda
51Kwathi emva koko kwabakho itheko lamaJuda, waza uYesu waya eJerusalem. 2EJerusalem kukho ichibi leegusha elibizwa ngokuba yiBhetesda ngesiHebhere. Ngakulo kukho iivaranda ezintlanu. 3Kuzo kwakulele into eninzi yezigulane – iimfama, neziqhwala, nabafe amacala. [Zazilinde ukuzanya-zanyiswa kwamanzi, 4kuba ngamaxesha athile sasisithi isithunywa seNkosi singene echibini apho, siwazama-zamise amanzi. Sasisithi ke isigulana esingene kuqala echibini emva kokuzanya-zanyiswa kwamanzi, siphile nakusiphi na isifo esasinaso.] 5Ke kwakukho ndoda ithile apho, eyayiminyaka imashumi mathathu anesibhozo igula. 6Kwathi uYesu akuyibona ilele apho, esazi nokuba selinexesha elide igula, wathi kuyo: “Uyafuna na ukuphila?”
7Saphendula isigulane sathi: “Nkosi, andinamntu wakundifaka echibini akuba amanzi egxobhekile. Ndithi ndisazama ukungena, ndisuke ndiphangelwe ngomnye.”
8UYesu wathi kuso: “Phakama! Thatha ukhuko lwakho, uhambe.” 9Kwathi kwangoko waphila loo mntu, waluthatha ukhuko lwakhe, wahamba-hamba.
Oku kwênzeka *ngoMhla wokuPhumla, 10aza amaJuda athi kulowo waphiliswayo: “KungoMhla wokuPhumla namhlanje; akuvumelekanga ukuba uthwale ukhuko lwakho.”
11Waphendula wathi: “Ondiphilisileyo uthe kum: ‘Thatha ukhuko lwakho, uhambe.’ ”
12Ambuza athi: “Ngubani na lowo uthe kuwe: ‘Thatha ukhuko lwakho, uhambe’?”
13Kodwa lowo waphiliswayo wayengamazi okokuba ungubani owamphilisayo, kuba kwakukho abantu abaninzi apho, noYesu wayeselemkile.
14Kwathi emva koko uYesu waphinda wadibana naye *endlwini kaThixo, wathi: “Khangela, uphilile ngoku. Yahlukana nesono, hleze uhlelwe yinto embi kunale.”
15Wahamba ke umntu lowo, waya kuwaxelela amaJuda ukuba nguYesu owamphilisayo. 16Ngenxa yaloo nto ke amaJuda amchasa uYesu, kuba esenza ezi zinto ngoMhla wokuPhumla. 17Wawaphendula ke uYesu wathi: “UBawo uyasebenza kude kube ngoku; nam ke ndiyasebenza.”
18Oku kwabangela okokuba amaJuda afune ngakumbi ukumbulala uYesu. Wayengachithanga uMhla wawo wokuPhumla kuphela, kodwa wayezilinganise nokuzilinganisa noThixo ngokuthi uThixo unguYise.
19Ke ngoko uYesu waziphendulela kumaJuda, wathi: “Ndithi kuni, inene, ayikho into ayenza ngegunya lakhe uNyana; kuphela wenza oko akubona kusenziwa nguYise. Oko akwenzayo uYise, naye uNyana uyakwenza; 20kuba uYise uyamthanda uNyana, embonisa zonke izinto azenzayo. Kwaye uya kumbonisa nezenzo ezikhulu kunezi, nitsho nimangaliswe; 21kuba kwanjengoko uYise abavusayo abafileyo, abadlise ubomi, ngokunjalo noNyana ubadlisa ubomi abo athandayo ukubadlisa. 22Kananjalo uYise akagwebi namnye. Lonke igunya lokugweba ulinika uNyana, 23ukuze bonke bamhlonele uNyana njengoko bamhlonelayo uYise. Lowo ke ungamhlonelanga uNyana, akamhloneli noYise owamthumayo.
24“Ndithi kuni, inene, lowo uwevayo amazwi am, abe ekholwa kulowo undithumileyo, unobomi obungunaphakade. Yena akayi kugwetywa nokugwetywa, kuba selephumile ekufeni wangena ebomini. 25Ndithi kuni, inene, kuza ixesha, kwaye selifikile, lokuba abasemangcwabeni balive ilizwi loNyana kaThixo, bathi abalivileyo badle ubomi. 26UYise, umthombo odlisa ubomi, ukunike noNyana ukudlisa ubomi. 27Kananjalo umnike negunya lokugweba, kuba yena *enguNyana woLuntu. 28Musani ukumangaliswa kuko oku, kuba ixesha liyeza abaya kuthi ngalo bonke abasemangcwabeni balive ilizwi lakhe, 29baphume emangcwabeni, bathi abo benze ubulungisa bavukele ebomini, bathi abo benze inkohlakalo bavukele ekugwetyweni.”
30“Mna ngokwam andinakwenza nto. Ndigweba njengoko ndiyalelweyo, kwaye ukugweba kwam kufanelekile, kuba andinanjongo yakwenza ntando yam, koko ndenza ukuthanda kwalowo undithumileyo.
31“Ukuba bendizingqinela ngokwam, ubungqina bam ngebuthandabuzeka. 32Kodwa ndinomnye ongqina ngam, kwaye ndiyazi ukuba ubungqina bakhe abuthandabuzeki. 33Senathumela kuYohane; ninabo ke ubungqina bakhe mayela nenyaniso. 34Anditsho kuba mna ndixhomekeke ekungqinelweni ngumntu, koko nditsho ukuze nina nisindiswe. 35UYohane wayesisibane esikhanyisayo, naza nina navuyiswa okwethutyana kukukhanyiselwa nguye. 36Kodwa ndinabo ubungqina obungaphezulu kobo bukaYohane, kuba imisebenzi andithumileyo uBawo ukuba ndiyifeze, ezi zinto kanye ndizenzayo, ziyandingqinela ukuba ndithunywe nguBawo. 37NoBawo ngokwakhe, yena lowo undithumileyo, ungqinile ngam, nangona nina ningazange nilive ilizwi lakhe, ningazange nimbone nokumbona. 38Ilizwi lakhe alibanga nandawo yakuhlala kuni, kuba anikholwa kulowo amthumileyo. 39Niyaziphengulula *iziBhalo, nizicingela okokuba ninobomi obungonaphakade ngokuzifunda; kanti zona zingqina ngam, 40kodwa nina anifuni ukuza kum ukuze nibe nabo obo bomi.
41“Mna andinanze kunconywa ngabantu; 42kodwa nina niyakufuna, kuba kaloku ukumthanda uThixo akukho kuni. 43Mna ndize ndigunyaziswe nguBawo, kodwa nina anindamkelanga. Ukuba ubani uthe weza ngelilelakhe igunya niya kumamkela! 44Beninokuthini kakade ukukholwa njengokuba nisemva kokuncomana nje, ningakukhathalelanga ukunconywa ngulowo unguThixo yedwa? 45Kodwa ke ze ningabi niya kumangalelwa ndim kuBawo. Ummangaleli wenu nguMosis, lowo nithembele kuye. 46Kaloku ukuba benikwamkela okubhalwe nguMosis, ngenindamkela nam, kuba uMosis wabhala ngam. 47Ke ukuba anikwamkeli oko wakubhalayo uMosis, beningathini kakade ukuwamkela amazwi am?”